Mapurisa ekanzuru achisunga vanotengesera mumigwagwa muHarare
Masoja nemapurisa vabatana nemapurisa ekanzuru yeHarare vachidzinga vanotengesera mumigwagwa yeguta iri izvo zviri kushorwa nevanorarama nekutengesa mumigwagwa yeguta iri.
Masoja, mapurisa eZRP pamwe neekanzuru anonzi anga achitorera vanotengesa mumigwagwa ava zvinhu zvavo vachizvikanda mumotokari dzavanga vachifamba nadzo.
Mumwe wevatorerwa zvinhu zvavanga vachitengesa, VaNesbert Gumbo, vanoti vasara vasisina chekubata sezvo zvinhu zvese zvavanga vawaridza pavanowanzotengesera mazuva ese zvatorwa nemasoja, mapurisa eZRP pamwe nemapurisa ekanzuru.
Mumwe anorarama nekutengesera mumigwagwa, VaFanwell Tsomondo, vanoti havasi kufara nezvave kuitwa nemasoja kupindira munyaya dzisineyi nekuchengetedza nyika.
VaRueben Mahoka vanoti zvinovarwadza kuti VaMnangagwa vave kukanganwa chazuro nehope vachiti kuti vave pachigaro hakusi kuda kweZanu PF chete asi kuratidzira kwakaitwa neveruzhinji vakabatana nenhengo dzebato riri kutonga ndiko kwakaita kuti vave pachigaro.
Nokudaro, VaMahoka vati VaMnangagwa vanofanira kutora matanho anogadzirisa nyaya dzinobata raramo yevanhu kwete kusweropedzera matombo kuzvidhii-dhii idzo njiva dzichauya.
Zvichakadai, Muzvare Tapiwa Kawadza, avo vanoraramawo nekutengesa vakurudzira hurumende yaVaMnangagwa kuti igadzirise nyaya dzekushayikwa kuri kuitwa mabasa neveruzhinji kuitira kuti vanotengesa mumigwagwa vawanewo zvimwe zvekuita.
Muzvare Kawadza vati kudzinga kwavari kuitwa mumigwagwa kwakafanana nekutongerwa rufu sezvo vachiti kutengesa mumigwagwa ndiko kuri kuita kuti nevana vavo vawane chouviri.
Mutauriri wemasoja, Colonel Overson Mugwisi, vaudza Studio 7 parunhare kuti kanzuru yeHarare ndiyo iri kudzinga vanhu mumigwagwa vachiti ivo semasoja basa ravo chete nderekuona kuti zviri kuitwa izvi zvaitwa murunyararo.
Hatina kukwanisawo kutaura nameya wedhorobha reHarare, VaBernard Manayenyeni, kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Asi mutauriri wekanzuru yavo, VaMichael Chideme, vakaudza nhepfenyuro yeZBC nezuro manheru kuti kanzuru yavo ichatora matanho akasimba kuti vanotengesera mumigwagwa vatengesere munzvimbo dzakatarwa nekanzuru kwete zvekuti vangomera sehohwa vachiita madiro aJojina pakati pedhorobha vasingabhadhare mitero kukanzuru.
Zvichakadai vanotengesera mumigwagwa vanoti vari kutsindirirwa mwena unobuda ishwa sezvo vachiti nzvimbo dzakatarwa nekanzuru dziri kure nevanhu vanotenga zvavanenge vachitengesa uye vanoti zvakare havakwane panzvimbo idzi.